Vaovaon'i Madagasikara eto amin'ny Mada Actus Info
Mada Actus info fa amin’ny teny malagasy. Andrianiko ny teniko, fa ny an’ny hafa koa feheziko. Ho hitanao eto ireo tsara ho fantatra rehetra momba ny fiainana eto Madagasikara sy ny any an-kafa koa.
Tontosa anio 08 jona 2019 any “Androm-bavaka maneran-tany” teny amin’ny kianjabe Mahamasina. Fotoana izay nialohavan’ny diabe niarahan’ireo Kristiana avy amin’ny fiangonana isan-karazany teto Antananarivo. Ity fotoana ity moa dia natao …
Andro vitsy sisa no andrasana de hiatrika ny CAN izay ho tanterahana any Egypte ny Ekipam-pirenena malagasy. Efa ao anatin’ny fiomanana tanteraka ny ekipam-pirenena malagasy amin’izao. Toa izao ny fandaharam-potoany.
Hiavaka ny fankalazana ny Taom-baovao Malagasy amin’ity taona 2019 ity. Na ny eto an-toerana na ireo avy any dilam-bato dia hiara-paly mandritra izany andro firavoravoana izany, ny zoma 05 sy …